Isikhungo Sokuthengiswa t siyisikhungo sokuthengisa sendawo ethengiswayo. Ifomu lokuqala lokwakha liyibhokisi lesikwele. Ukwakheka okungaphakathi ngaphakathi kungabonakala kusuka ngaphandle kwesakhiwo futhi ukwakheka kwengaphakathi kubonakaliswa ngokuphelele ukuphakama kwesakhiwo. Kunezindawo ezine zomsebenzi, indawo yokubonisa imultimedia, indawo yokubonisa imodeli, indawo okuxoxisanayo ngayo kusofa nendawo eboniswayo. Lezi zindawo ezine zomsebenzi zibukeka zihlakazekile futhi zizodwa. Ngakho-ke safaka iribhoni ukuxhuma yonke indawo ukufeza imiqondo emibili yoyilo: 1. Ukuxhuma izindawo zomsebenzi 2. Ukwenza ukwakha ukuphakama.
Isakhiwo Sehhovisi Isikhala esizeni asijwayelekile futhi sijika ngenxa yodonga lwangaphandle lwesakhiwo. Ngakho-ke umqambi usebenzisa umqondo wentambo yokugeleza kuleli cala ngethemba lokudala umqondo wokuhamba futhi ekugcineni uguqulwe waba yimigqa yokugeleza. Okokuqala, sidiliza udonga lwangaphandle olungaphandle komgwaqo womphakathi futhi sisebenzise izindawo ezintathu zomsebenzi, Sisebenzise umugqa wokugeleza ukujikeleza lezi zindawo ezintathu futhi umugqa wokugeleza nawo ungena ngaphakathi. Le nkampani ihlukaniswe iminyango emihlanu, futhi sisebenzisa imigqa emihlanu ukubamele.
Design / Umbukiso Wokuthengisa
Design / Umbukiso Wokuthengisa Kokubili ukwakheka nomqondo wokusebenza wenoveli okwenza umbukiso we "dieForm" ususeke kakhulu. Yonke imikhiqizo ye-showroom ebonakalayo ebonakalayo iyabonakala. Izivakashi ziphazamiseka emkhiqizweni hhayi ngokukhangisa noma abasebenzi bokuthengisa. Imininingwane eyengeziwe ngomkhiqizo ngamunye ingatholakala ekubonisweni kwe-multimedia noma ngekhodi le-QR endaweni yokubukisa ebonakalayo (uhlelo lokusebenza kanye newebhusayithi), lapho imikhiqizo nayo ingayalwa khona lapho. Umqondo uvumela uhla olujabulisayo lwemikhiqizo ukuthi luboniswe ngenkathi kugcizelelwa umkhiqizo kunegama.
Global Trade Fair Design Designto Toyota
Global Trade Fair Design Designto Toyota Ugqugquzelwe yisimiso saseJapan "sokuzola okusebenzayo", ukwakheka kuhlanganisa izakhi ezinengqondo nezomzwelo entweni eyodwa. Isakhiwo sibukeka minimalistic futhi sizolile kusuka ngaphandle. Noma kunjalo ungazizwa amandla amakhulu aphuma kuwo. Ngaphansi kwesipelingi saso, uphume ujabule ungene ngaphakathi. Lapho usungenile ngaphakathi, uzithola usesimweni esimangazayo esigcwala amandla futhi ugcwele izindonga ezinkulu zemidiya ezibonisa izithombe ezishisekayo nezingabonakali. Ngale ndlela, ukuma kuba yinto ekhumbulekayo yezivakashi. Umqondo uveza ibhalansi ye-asymmetrical esiyithola endalweni nasenhlizweni yobuhle baseJapan.
Isitolo Kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani ngivalele udonga olude (amamitha angama-30) ngaphambili. Okokuqala, ukuthi ukuphakama kwesakhiwo esikhona bekungathandeki ngempela, futhi bengingenayo imvume yokukuthinta! Okwesibili, ngokufaka i-facade engaphambili, ngithole amamitha angama-30 wesikhala sodonga ngaphakathi. Ngokuya ocwaningweni lwami lwezibalo lwansuku zonke, iningi labathengi bakhethe ukungena ngaphakathi esitolo ngenxa yokufuna ukwazi, nokubona okwenzekayo ngemuva kwalesi simo samafomu weCade.
Indawo Yokudlela I-Revolt Counter eya e-Urban Beat. Isisekelo sitholakala ekuphambanweni komgwaqo okuxakile. Uhlelo oluphelele lwendawo luhlose ukudala ijubane eliqondana futhi elixazululiwe, njengokunikeza isikhathi sokunciphisa ijubane futhi kulempilo yasedolobheni ephuthuma ukujabulela umzuzwana ngamunye lapha nalapha. Isikhala esivulekile, njengoba sakhiwa, ngokuhlelela okuphakathi, sahlukanisa isikhala ngokusekwe kokusebenza okuhlukile. Izikrini ezinjenge-totem zengeza kuma-Spatial spatial ambience okunye ukudlala okudlalwa.
Isikhungo Sokuthengiswa Isakhiwo Sehhovisi Design / Umbukiso Wokuthengisa Global Trade Fair Design Designto Toyota Isitolo Indawo Yokudlela